Griezmann oo sheegay inuu jecel yahay shacabka Uruguay, xili Luis Suarez uusan ku qancin hadalka laacibka reer France – Gool FM
(Russia) 03 Luulyo 2018. Weeraryahanka heerka caalami ee dalka Uruguay Luis Suarez ayaa sarre u qaaday muranka, kadib markii uu jawaab ka bixiyay hadal uu dhawaan sheegay Antoine Griezmann.
Weeraryahanka xulka qaranka France Antoine Griezmann ayaa wuxuu dhawaan ku maadeestay shacabka reer Uruguay.
Xulalka Uruguay iyo France ayaa waxay isku diyaarinayaa kulanka wareega 8-da ee koobka aduunka 2018 ay ku wada ciyaari doonan maalinta jimcaha ee soo aadan. Kadib markii ay kasoo wada gubeen xulalka Portugal iyo Argantina.
Griezmann ayaa kulanka kahor sheegay “Uruguay waa dalkeyga labaad, waan jeclahay, waxaan sidoo kale jeclahay shacabka reer Uruguay,
“Waxaan ku leeyahay saaxiibo badan, ciyaarta waa mid cajiib ah, waxaana dareemayaa dareen badan”.
Laakiin Luis Suarez ayaa ka jawaab celiyay hadalka Griezmann “Griezmann ma garanayo waxa ay ka dhigan tahay inaad noqoto Uruguay, wuxuu sheegya inuu yahay Uruguay, laakiin waxaa xaqiiqo ah inuu yahay France”.